I-Evpatoria idolobha elihle elihle kakhulu elinemigwaqo ethule eholela enhliziyweni yayo - olwandle. Kukhona izindawo zokungcebeleka zezempilo ezingu-46, kanye namabhishi angama-80 ahlomile, ama-35 awo afinyeleleke kuwo wonke umuntu. Njalo ngonyaka, izinkulungwane zama-holiday-makers zifuna lapha. Ukuhlala emahhotela asendaweni nasezinhlanhleni zempilo, awukwazi ukuthuthukisa impilo yakho kuphela futhi ujabulele ubuhle bemvelo, kodwa futhi ujoyine umlando omdala wale ndawo.
Iyaziwa ngokukhethekile edolobheni elinjalo njenge-Evpatoria, "i-Burevestnik" iyisimo senkundla yoMnyango Wezangaphakathi ZaseRussia. Lesi sikhungo sokuvuselela kwezokwelapha sasungulwa ngo-1951 kubasebenzi boMnyango Wezangaphakathi, ekwelapheni ukulimala nezifo zesimiso se-musculoskeletal. Itholakala endaweni yokubhuka, u-0.5 km ukusuka olwandle kanye no-0.2m ukusuka ekudleni okudumile i-Moinaki.
Ezingxenyeni ezimbili zendawo yokuphumula uphinde ulungise impilo yabantu abangaphezu kuka-350. Isikhathi sokwelashwa - kusukela ezinsukwini eziyishumi. Izivakashi zihlala ekamelweni elilodwa elikamelo elilodwa namakamelo amabili okugumbana noma emakamelweni owodwa ezinokuzikhethela okuyingxenye. Suites zihlomele konke okudingayo. Ukudla, okuhlukahlukene, ukudla okwesine ngosuku. Ukhethwe ngabanye. Zidla ngokuqukethwe okuncishisiwe kasawoti nezinongo, kwimenyu - eziningi zokukhetha zokupheka izinhlanzi nemifino.
Ngamakhulu eminyaka abantu abaningi bezokuvakasha bavame ukufika esiteshini "se-Burevestnik". I-Evpatoria iyakhanga kakhulu izivakashi, endaweni yokuhlala kunezindawo eziningi zokungcebeleka kwezempilo, kodwa hhayi ngamunye wabo unelwandle lwayo. Ihlomele kahle: ayikwazi nje ukubhukuda nokushisa ilanga kuphela, kodwa futhi ihamba ngamabhayiseki, abakwa-catamarans noma nje uphumule ogwini, uhlezi ebhodini futhi ula ukudla izitsha zase-oriental. Ibhishi elinesihlabathi esihle, ukuguqulwa okushelelekile kokujula nolwandle oluhlanzekile ngeke kushiye abantu abadala, noma abantwana. Kwabancane kukhona ucingo olukhethekile. Uma uthanda, ungavakashela ibhishi elincane, elitholakala ngaphakathi kwedolobha futhi liyatholakala kalula. Kukhona nedamu lokubhukuda kwesinye sezikhungo zendawo.
Ungakwazi ukuhlukanisa isikhathi sakho sokungcebeleka esikhwameni se-billiard noma chess, futhi abathandi bemisebenzi yangaphandle bazokwazi ukukhombisa amakhono abo ezemidlalo enkantolo yezintambo, emidlalweni yezemidlalo noma e-gym. Abafundi abangafaneli ukuvakasha kwabo ngaphandle kwezincwadi ezinhle, isikhungo sezempilo sihlinzeka ukuvakashela umtapo wabo.
Futhi akuwona wonke amasevisi ama-sanatorium ase-Burevestnik anikeza. I-Evpatoria nayo idume ngokuzijabulisa kwayo ebusuku. Isikhungo sinomdanso wayo. Isikhathi esiseduze sithatha indawo, sihlanzekile, sinamafutha amaningi, indawo enkulu yokudlala.
Ukwelashwa esiteshini somnyango we-Ministry of the Interior of Russia "Freevestnik"
I-Evpatoria iyi-resort eyaziwa kakhulu yezempilo, eyaziwa ngama-estuaries ayo amaningi kanye nechibi elinomuthi wokuphulukisa nodaka - i-Moinaki. Akukude nomuzi kunesinye isikebhe esidumile - iSasyk-Sivash. "I-Health's Resort Resort", "Izwe Lezingane" - lawo magama athandwayo athola i-Evpatoria. "I-Burevestnik" yindawo yokuphumula futhi ingelashwa ngabantu abadala kuphela, kodwa futhi nezingane. Isikhungo sisebenzisa izindlela zanamuhla zokwelashwa kwe-sanatorium, njenge:
Amanzi amaminerali emithi,
Ukusikhipha ngaphansi kwamanzi,
Ingcebo yemvelo yamachibi okuphulukisa edolobheni (amabhuku okugeza),
I-hypertension 1-2 degrees,
Ukuphefumula kwesifo sofuba se-intantile,
Izifo kanye nesifo sokugulisa umgogodla ngemuva kwesikhathi esiyinkimbinkimbi,
Izifo zesimiso sezinzwa,
Isifo senhliziyo kanye nesistimu yamascular,
I-Neurosis esigabeni sesinxephezelo,
Izifo ezingenakulinganiswa kwamazinyo nesigxobo somlomo,
Izifo ezingenasiphakamiso zesimiso sokuphefumula,
Ukwehluleka kwemizwa yemvelaphi ehlukile,
Izifo ezihlukahlukene zesistimu ye-musculoskeletal kanye ne-rheumatism,
I-rhinitis, sinusitis, i-laryngitis ngesikhathi sokuxolelwa,
Imiphumela yokujikeleza kwe-cerebral,
I-tonsillitis engapheli ngesikhathi sokuxolelwa,
I-Cystitis esikhathini sokuxolelwa.
Ukungahambisani nemithi yokwelashwa esiteshini sempilo "i-Burevestnik", i-Evpatoria
Akunconywa ukuba unyatheliswe phakathi nezifo ezilandelayo:
Ischemic isifo senhliziyo, arrhythmia, angina pectoris,
Umsebenzi ongasebenzi ngokweqile,
Ukuphikisana okujwayelekile okuhlobene nokuphathwa kwe-spa,
Lesi sakhiwo sinikeza nezinsizakalo ezengeziwe, ezikhokhelwa ngokwahlukana:
Ukuxilongwa komuntu ngamunye usebenzisa imishini yesimanje,
Izivivinyo ezahlukene ze-laboratory,
Ukuhlonza ngeSy Jok uhlelo,
I-Evpatoria idolobha elinomlando weminyaka eyinkulungwane
Okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka kokunye kuzokwethula yi-Evpatoria! "I-Burevestnik" iyisimo sokuhlanza esingasinikeza ukwelashwa kuphela, kodwa futhi nokuhamba ngeenxa zonke edolobheni. Le ndawo eyingqayizivele hhayi kuphela ngoba ihlanganisa amabhishi anesihlabathi namatshe. Izinkolo eziningi zihlala ensimini yayo: isonto lama-Orthodox, isonto lase-Armenia neGrisi, ama-dervishes amanje, i-mosque, amasinagoge amabili, kanye nomakhelwane we-keraim kenasy bonke endaweni eyodwa! E-Yevpatoriya, kuyisiko ukuhlonipha ukholo lomunye umuntu, ngaphezu kwakho konke ukuphumula nobuhlobo obuhle.
Umlando wedolobha uneminyaka engaphezu kwengu-25. Iminyaka eyizinkulungwane ezimbili nengxenye kusukela esisekelo somuzi sigubha ngo-2003. Kwesinye isikhathi kwakukhona iPontic, amaGreki, amaSkithe, amaTatars, amaHuns, amaTurkey nezinye izizwe eziningi. Igama le-settlement lishintsha izikhathi eziningana: i-Kerkinitida (eyenzeka egameni lomsunguli), iGolziew (ovela e-"supervise" yaseTurkey), futhi kusukela ngo-1784 ekuhlonipheni inkosi uPontus Mitridates VI Evpator idolobha labizwa nge-Evpatoria. Indawo enomlando wasendulo kanye nabantu abaningi abangeke bakwazi ukuzilimaza. E-Evpatoria ungabona iminyuziyamu ye-lore yendawo, lapho "izinhlayiya" ezihlukahlukene zomlando we-resort ziqoqiwe, kanye nokugibela ku-tram eyodwa-ithrekhi egijima eduze kwengxenye yakudala yedolobha.
Ngesikhathi sabo sokuphumula, abavakashi bangakwazi ukuvakashela kuphela amadolobha ase-Evpatoria, kodwa futhi bahambahamba eCrimea entaba, kuhlanganise nokugibela ihhashi eNtabeni iDederdzhi. Ungakwazi futhi ukuya ngokwakho ogwini oluseningizimu eCrimea: ukuya kuSevastopol, Yalta, eGelendzhik. Ungayenza emotweni yakho noma kumatekisi ongenqunyiwe ogijima esiteshini sebhasi sase-Evpatoria.
I-Sanatorium "Burevestnik" ye-Ministry of the Interior of Russia, Evpatoria: ukubuyekezwa
Yini abagibeli bezokuvakasha ngokwabo abathi bakhambele i-Burevestnik Sanatorium (Evpatoria)? Ukubuyekeza mayelana nendawo kuningi kakhulu. Izivakashi zivame ukuqaphela ukuqeqeshwa kwabasebenzi nabasebenzi bezokwelapha esiteshini samalungiselelo eMnyango Wezangaphakathi waseRussia "i-Burevestnik". Okumangalisa kakhulu isimo sengqondo sokunakwa sabasebenzi kubo bonke abantu, kungakhathaliseki isimo nesimo sabo. Insimu ehlanzekile, ehlanziwe, amakamelo akhululekile kanye nokudla okunomsoco okumnandi futhi iyaphawula ngabaningi be-holiday-makers. U-Evpatoria uqobo uyakhunjulwa. "I-Burevestnik" yindawo yokuhlenga, eseduze nesikhungo semlando. Lapha konke kuphelile: kokubili izikhumbuzo zokwakha, nezindawo zokudlela eziphuzile nemenyu ehlukahlukene yazo zonke izintandokazi. Futhi-ke, ulwandle.
Ungafika kanjani ku-sanatorium
I-sanatorium itholakala ku: Pavlik Morozov Street , 7/13. Kusuka esiteshini se-Evpatoria ungayifinyelela ngenombolo yebhasi 6. Kusukela Simferopol - ngebhayisikili ekhethekile yokuhamba.
Isimiso seMnyango Wezangaphakathi "i-Burevestnik" (i-Evpatoria) yisona esingcono kakhulu sokuvakasha komndeni!
Isibhedlela saseMoscow: incazelo, ukubuyekezwa
Wayefisa umfula - iphupho nencazo esiyibika kahle kuphela
Onion ikhasi izinwele. Ungadliwa broths kanye nezincomo
Umlingisikazi Elena Prudnikov: Biography, amabhayisikobho best, izithombe
Yikuphi zabesilisa isikhwama isezingeni eliphakeme imfashini yesimanje?
Imishwana amahle ezihlakaniphile mayelana uthando
Indlela ukudonsa umkhaza kahle.
Izici Bezakhiwe kwamaseli columnar ijwabu. Udonga, amaqembu (columnar) leaf izicubu izitshalo ipuleti
I-Airport yeBodrum: endleleni yokuphumula
Umphumela Zeigarnik kwengqondo